Imba>chigadzirwa>Ruvara Acylic Sheet>Opal & chena Colors Acrylic Sheet
Tinopa akati wandei eOpal & Machena mavara acrylic sheet, Iyo ine hunhu hwekupararira kuratidza. Chishandiso chavo chikuru ndechekuratidzira uye kushambadzira kana kushongedza kwekuvaka. Sarudza maererano nezvido zvako.
CE, SGS, DE, uye ISO 9001
MASHOKO Specific Gravity - 1.19-1.2 >
Muzhizha (40 ℃), ichawedzera kusvika 1002 Munguva yechando (-30 ℃), Ichapfupisa kusvika 997mm.
Yedu yepamusoro mhando acrylic machira ane akajeka kujekesa, mamiriro ekunze uye yakakwira simba. Vanogona kuve thermoformed, akachekwa, akaboorwa, akakotamiswa, akagadzirwa, akanyorwa, akapukutwa uye akanamwa.Iwo anogona kuiswa kune signage uye kushambadzira / zvekurapa / acrylic barrier / michina / sanitaryware / kuvakwa / zvemukati dhizaini uye fenicha / mota / zororo / hofisi stationery / acrylic jewelry nezvimwewo.